I-Moosend: Zonke Izici Zokumaketha Ezenzekelayo Zokwakha, Ukuhlola, Ukulandelela, Nokukhulisa Ibhizinisi Lakho | Martech Zone
Enye into ethokozisayo embonini yami ukwenziwa kwezinto ezintsha okuqhubekayo kanye nokwehla okumangazayo kwezindleko zamapulatifomu ezentengiselwano ezidayiswe kakhulu. Lapho amabhizinisi ake asebenzisa khona amakhulu ezinkulungwane zamaRandi (futhi asakwenza namanje) ezisekelweni ezinhle… manje izindleko zehle kakhulu ngenkathi ama -etsetets eqhubeka nokuthuthuka.
Muva nje besisebenza nenkampani yokugcwalisa imfashini yebhizinisi ebikulungele ukusayina inkontileka yesikhulumi esizobabiza ngaphezu kwesigamu sesigidi futhi sabeluleka ngaso. Ngenkathi ipulatifomu yayinezinto zonke ezesabekayo, amandla okuhlanganisa, nokuxhaswa kwamazwe omhlaba… ibhizinisi laliqala nje, lalingenawo ngisho nomkhiqizo, futhi lalithengisa kuphela e-United States.
Yize kungenzeka ukuthi bekuyisixazululo sesikhashana sokwakha ibhizinisi labo, kodwa sibatholele isixazululo ngenani elincane lezindleko ebelizothatha umzamo omncane kakhulu ukuliqalisa. Lokhu kuzosiza ukugeleza kwemali ebhizinisini, kubasize bagxile ekwakheni umkhiqizo wabo, futhi kubasize ukuthi bakhulise imali engenayo… ngaphandle kokuphuka. Ngokusobala, abatshalizimali babo babejabule impela.
I-Moosend: I-imeyili Yokumaketha Nokumaketha nge-imeyili
Kwibhizinisi elijwayelekile elibheke ukufaka isizukulwane esiholayo, yakha kalula futhi ushicilele ama-imeyili, bese usetha ezinye izindlela zokumaketha, bese ulinganisa umthelela… uzothola konke okudingayo I-Moosend.
Ipulatifomu iza kuqala ukugcwala ngamakhulu ama-templates ama-imeyili aphendulayo, amahle nakho konke okuzenzakalelayo okudingayo ukuze uqalise ngamahora kunezinyanga.
I-Moosend: Hudula bese ulahla i-imeyili Builder
Isihleli esisebenziseka kalula sokuhudula nokwehlisa sisiza noma ngubani ukuthi enze izincwadi zezindaba ezibukeka zizinhle kunoma iyiphi idivayisi, ezinolwazi lwe-zero zero. Ngamakhulu ama-templates asesikhathini ongakhetha kuwo, imikhankaso yakho yokuthengisa ye-imeyili izogqokelwa impumelelo.
I-Moosend: Ukumaketha kwe-Automation Workflows
I-Moosend ikusiza ukuthi wakhe ukugeleza kokuzenzakalela kokukhangisa okuhlukile okushayela amazinga wokuguqulwa. Futhi banikela ngezinto eziningi ezenziwe ngomumo zokupheka ukuze uqalise… kufaka phakathi:
Ukuzisebenzisela Ukugibela Komsebenzisi
Ukuhola Okuzenzakalelayo Okuzenzakalelayo
Izipesheli Zokunikezwa Kwe-VIP
I-automation ngayinye inikezela ngezimbangela, izimo, nezenzo zokwakha ukuguqula i-automation ekhona noma ukuzakhela eyakho. Izimo zakho zinezimo eziningi zokuqalisa, ama-imeyili aphindayo, izikhathi eziqondile, kanye / noma izinkulumo, setha kabusha izibalo, yabelana ngokuhamba komsebenzi, engeza amanothi, hlanganisa izindlela futhi uhlole izibalo kunoma isiphi isinyathelo sokuhamba komsebenzi.
Dlulisa amehlo Moosend Ungadliwa
I-Moosend: Ukuhlanganiswa kwe-Ecommerce
I-Moosend inokuhlanganiswa kwendabuko neMagento, WooCommerce, ITriveCart, i-PrestaShop, i-OpenCart, i-CS-Cart, ne-Zen Cart.
Ngaphandle kokuzenzakalela okujwayelekile kwe-e-commerce njenge inqola yokuthenga elahliwe ukuhamba komsebenzi, baphinde banikeze izincomo ezisuselwa kusimo sezulu, izincomo zomkhiqizo ezenzelwe wena, nezincomo zomkhiqizo eziqhutshwa yi-AI. Ungaphinda uhlukanise izethameli zakho ngokuthembeka kwamakhasimende, ukuthenga kokugcina, amathuba okuthenga kabusha, noma amathuba okusebenzisa isigqebhezana.
I-Moosend: Ukufika Kwekhasi Nabakhi Bamafomu
Njengomakhi wabo we-imeyili, uMoosend unikeza umakhi wekhasi lokufika elihlanganisiwe onawo wonke amafomu nokulandelela ongalindela ukwenza izinto zibe lula. Noma, uma ungathanda ukufaka ifomu kusayithi lakho, mane ulakhe bese ulishumeka.
Ungabona ukuqhubeka kwethemba lakho ngesikhathi sangempela - ukulandelela kuvula, ukuchofoza, ukwabelana ngomphakathi, nokuzikhipha ohlwini.
I-Moosend: Ukwenza ngokwezifiso okuqhutshwa idatha
Ukwenza ngezifiso kungenye yaleyo migomo evame ukusetshenziswa ngokweqile ekuzenzekelayo kokumaketha. I-Moosend ukuzenzela ayigcini nje ngokubuyekeza izinkambu ezingokwezifiso ngaphakathi kokuqukethwe kwe-imeyili, futhi ungahlanganisa izincomo ezisuselwa kusimo sezulu, imikhiqizo eyenziwe ngezifiso kanye nokubeka ubuhlakani bokuzenzela ngokuncoma imikhiqizo esuselwa kukho konke ukuziphatha kwabavakashi bakho namathuba abo okuthenga. Ukuhlukaniswa ngaphakathi kwe-Moosend nakho kudlulela ngaphezu kwama-imeyili, amakhasi okufika, namafomu.
UMoosend une-API enamandla kakhulu, unikeza ifomu lokubhalisa le-WordPress, angasetshenziswa nge-SMTP, une-plugin yeZapier, kanye nethoni lokunye ukuhlanganiswa kwe-CMS, i-CRM, i-List Validation, i-Ecommerce, ne-Lead Generation.
Bhalisela i-Moosend Mahhala
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene naye I-Moosend futhi ngisebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo kulesi sihloko.
Tags: inqola yokuthenga elahliweezishintshayoCS-Cartamakhasimende athembekile ama-imeyilihudula bese uphonsa umhleliezishintshayo ze-ecommerceukumaketha kwe-ecommerceumakhi we-imeyiliimeyili Marketingi-imeyili yokumaketha yesikhulumiumhlinzeki wesevisi ye-imeyiliespifomu builderumhleli wekhasi lokufikaMagentoukuzenzekelayo kokuzenzekelayoukuhamba komsebenzi kokukhangisaI-MoosendukuvulaPrestaShopI-ThriveCartWooCommerceizindlela zokupheka zokuhamba komsebenziKufakiwe Zen